Académie Fahombiazana – Ny tsiambaratelon’ny fahombiazana voasana aminao ao anaty fiofanana – Blaogin'i Voniary
Voalaza ombieny ombieny fa ny toe-tsaina no tsy mampandroso antsika Malagasy: mora mionona amin’izay ananana, manome tsiny ny hafa, miandry ny hafa handray andraikitra, matahotra fiovana, sy ny maro hafa. Azo ovaina anefa izany, ary tsy maintsy ovaina raha te-hahomby ianao eo amin’ny fiainana. Mino aho fa matoa ianao manaraka ny Blaogin’i Voniary na tonga eto amin’ity pejy ity dia anisan’ireo tonga saina ka maniry ny hiova sy hanova zavatra. Anisan’ireo maniry fahombiazana.
Izany indrindra no anisan’ny antom-pisian’ny Blaogin’i Voniary, mba hanentana ny tsirairay handray an-tanana ny fiainany, hanana fijery miabo sy toe-tsaina mpandresy. Hitanao amin’ny alalan’ireo lahatsoratra mivoaka eto amin’ny blaogy izany na koa ao anatin’ilay boky “Raiso an-tanana ny fiainanao”.
Asa vadi-drano anefa izy ity ka tsy vita raha tsy ifanakonana. Mahavelom-bolo hatrany ny mahita ireo namana mizara sy mampiofana momba ny fampivoaran-tena (développement personnel) amin’ny endriny isan-karazany.
Sendra nanao fikarohana momba ny fahombiazana tao amin’ny aterineto iny aho no nahita ity anankiray ity: Académie fahombiazana. Akory moa ny hafaliako nahita fa hay efa misy an’itony fiofanana an-jotra (formation en ligne) manara-penitra itony eto amintsika sady amin’ny teny malagasy. Tsy vitan’izany fa mikasika ny fampivoaran-tena ilay izy. Ka tsy andriko mihitsy ny fotoana hanoratako momba ilay izy ka izarako azy eto amin’ny blaogy.
Inona moa ny Académie fahombiazana?
Ny Académie fahombiazana dia sehatra iray ahafahanao manovo fahalalana mikasika ny fahombiazana. Natao ho an’ny olona rehetra izay maniry ny tena fahombiazana sy te-hanatratra tanjona ny fiofanana.
“Tsy nofinofy intsony fa tena azonao atao mihitsy, na iza ianao na iza, na manao ahoana ianao na manao ahoana, ny mahita fahombiazana goavana eo amin’ny fiainanao, mahatratra ny tanjona izay tianao rehetra ary manana fiainaana izay tena manome fahafaham-po anao.”
Raha tsorina dia ny tsiambaratelon’ny fahombiazana no voaboasana aminao ao.
Ny fizotry ny fiofanana ao amin’ny Académie fahombiazana
Fiofanana an-jotra, ao anatin’ny ambaratonga telo, no atolotry ny Académie fahombiazana. Amin’ny alalan’ny tantaran’olona nahita fahombiazana na lesona no ampitaina ny fampianarana. Misy amin’ny endriny PDF, azonao vakina an-tsolosaina na atonta ary amin’ny endriny MP3, azonao henoina amin’ny solosaina, finday, MP3 sy ny hafa ny fampianarana. Misy sarany arakaraka ny ambaratonga ny fanarahana fiofanana ao amin’ny Académie fahombiazana saingy ny iray volana voalohany dia tsy andoavam-bola.
Ny pejy fandraisana ao amin’ny Académie Fahombiazana
Mazava ho azy fa mila miditra ho mpikambana ao amin’ny tranonkala ianao vao afaka misitraka izany. Tsy hoe voatery manana aterineto ao an-trano anefa ianao na koa hoe aterineto matanjaka be. Afaka manaraka ny fiofanana ianao na any amin’ireny “cybercafé” ireny aza. Ny angatahina aminao dia ny manokatra mailaka sy mitsidika ny tranonkala indray mandeha isan-kerinandro farafahakeliny mba handraisanao ny lesona sy hahazoanao vaovao.
Tsy voatery amin’ny solosaina ihany koa anefa fa azonao atao koa ny maka izany amin’ny alalan’ny telefaonina. Ary ankehitriny efa azonao raisina ao amin’ny hafatra manokana ao amin’ny Facebook ihany koa ny lesona.
Araho avy hatrany àry ity rohy ity raha te-hiditra mpikambana ao amin’ny Académie fahombiazana ianao.
Ny indrokely dia tsy amin’ny teny malagasy madio rano ny fiofanana satria avy amin’ny fahalalana avy any ivelany no nakàna azy. Noho izany, maro ny voambolana tsy voadikan’ny tompon’andraikitra. Tsy mampihena ny lanjan’ny fampianarana sy ny soa azo avy aminy anefa izany amiko fa azo hatsaraina miandalana eny ihany.
Iza no mpampiofana?
Nary Andriatsolondriaka namorona any Académie Fahompiazana no manolotra ny fiofanana. Raha te-hahafantatra azy bebe kokoa ianao: ny lalana nodiaviny, ny antony nananganany ny Académie na ny foto-pisainany dia aza misaraka aminay fa ho hitanao ao amin’ny lahatsoratra manaraka izany.
Efa nanandrana aho
Hatramin’ny nisokafan’ny tranonkala tamin’ny taona 2009 dia efa arivo (1000) mahery no nisoratra anarana tao ary valonjato (800) eo ny manaraka ny fiofanana ankehitriny.
Raha izaho manokana izay vao niditra ho mpikambana indray dia efa hitako sahady ny soa mitafotafo atolotry ny Académie fahombiazana tamin’ny alalan’ny ilay tolotra iray volana maimaimpoana sy ny fanomezana.
Iray volana maimaimpoana
Maimaimpoana ny iray volana voalohany ahafahanao manandrana sahady ny tsiron’ny fiofanana. Tsy hoe fampianarana tsizarizary anefa no atolotra amin’izany fa tena fahalalana feno manampy anao amin’ny dingana voalohany mankany amin’ny fahombiazana. Ohatra amin’izany:
Ny famadihana ny TSY AZO ATAO (Impossible) ho AZO ATAO (possible)
Ny fanombohana na fiaingana ho amin’ny fahombiazana
Ny fomba fahitana vola amin’ny fomba isan-karazany mba hanatraranao ny tanjona ara-bola sy hamahanao ny olana ara-bola
Ny lanjan’ny eritreritra (pensée)
Ny fomba fakana fahaizana ka hahatonga anao ho manam-pahaizana hikoizana eo amin’ny sehatra misy anao
Fanomezana ho an’ny mpikambana vaovao
Tsy vitan’izany ihany anefa fa misy fanomezana goavana sy sarobidy atolotry ny Académie fahombiazana ny mpikambana vaovao rehetra. Goavana sy sarobidy hoy aho satria tena toy ireny nahita kitapo feno vola ireny aho raha nahita ilay izy. Boky maromaro momba ny fampivoaran-tena, MP3 sy seminera an-tsary mikasika ny dingana voalohany amin’ny fahombiazana no atolotra maimaimpoana.
“Mino tanteraka koa izahay fa vitantsika Malagasy rehetra tsirairay tsy an-kanavaka ny manova ny fiainantsika ho fiainana ananantsika rehetra ny ampy, iainantsika milamina tsy misy korontana toy ny teo aloha intsony, ary indrindra hanatanterahantsika ny nofinofintsika tsirairay avy.”
Marihana fa afaka mijanona tsy misy arakaraka ianao rehefa vita ilay iray volana andrana.
Amiko, efa soa mitafotafo ireo zaraina ireo, hafatra enti-miaina, singa manova fiainana. Ka azoko vinaniana ny soa goavana kokoa ho azoko raha MIROSO LALINA KOKOA aho.
Tsidiho ary ny Académie Fahombiazana ary aza misalasala miditra mpikambana mba hanarahanao ilay IRAY VOLANA MAIMAIMPOANA.
Fanairana hambom-po, Resadresaka
académie fahombiazana, développement personnel gasy, empowerment gasy, fahombiazana, fampivelarana ny isam-batanolona, fampivelarana ny maha-olona, fampivoaran-tena, personal growth gasy, tsiambaratelonnyfahombiazana
2 commentaires sur “Académie Fahombiazana – Ny tsiambaratelon’ny fahombiazana voasana aminao ao anaty fiofanana”
razaiarisoa tsifidina zakandrrainyy dit :
aiza ny isoratana anarana
5 octobre 2020 à 7 h 00 min
Ao amin’ny tranonkala http://www.academie730.fahombiazana.com/